Jasiiradda Palau waxay qorsheyneysaa mamnuucidda qorraxda si loo badbaadiyo dhuxusha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Jasiiradda Palau waxay qorsheyneysaa mamnuucidda qorraxda si loo badbaadiyo dhuxusha
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Micronesia • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Jasiiradda yar ee ku taal Jasiiradda Baasifigga ee Palau waxay mamnuuci doontaa qorraxda "reef-sunta ah" qoraxda laga bilaabo 2020 taas oo ay ku andacooneyso inay tahay qorshe adduunka ugu horreeya oo lagu joojinayo wasakheynta kiimikada ee lagu dilo meeraheeda caanka ah.
Palau, oo dhacda galbeedka Baasifigga qiyaastii kala badh inta udhaxeysa Australia iyo Japan, waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee quusitaanka adduunka, laakiin dowladda ayaa ka walaacsan in caannimadeeda ay ku kacayso qiimo.
Afhayeen u hadlay madaxweynaha Tommy Remengesau ayaa sheegay in ay jiraan cadeymo cilmiyaysan oo sheegaya in kiimikooyinka laga helo inta badan shaashadda qorraxda ay sun ku yihiin dhuxusha, xitaa qadar daqiiqado ah.
Waxa uu sheegay in goobaha quusitaanka ee Palau sida caadiga ah ay martigeliyeen ilaa afar doonyood saacaddii oo ay buuxaan dalxiisayaal, taas oo horseeday walaac laga qabo in kiimikooyin soo kordha ay arki karaan reefs-ku inay gaaraan barta caarada.
"Maalin kasta oo u dhiganta gallon of sunscreen ah oo galaya badweynta meelaha caanka ku ah Palau iyo meelaha lagu quudiyo," ayuu u sheegay AFP.
Waxaan kaliya eegaynaa waxa aan sameyn karno si aan uga hortagno in wasakheynta ay soo gasho deegaanka.
Dowladu waxay meel marisay sharci mamnuucaya sunscreenka “reef-sunta” laga bilaabo Janaayo 1, 2020.
Qof kasta oo soo dejiya ama iibiya qoraxda laga mamnuucay taariikhdaas wuxuu wajahayaa ganaax lacageed oo gaaraya US $ 1,000 (3,300 baht), halka dadka dalxiisayaasha ah ee dalka keena ay la wareegi doonaan.
"Awoodda in lala wareego muraayadaha qorraxda waa inay ku filnaadaan in laga hortago adeegsikooda aan ganacsiga ahayn, qodobadanna waxay ku socdaan miisaan dheellitiran oo u dhexeeya waxbaridda dalxiisayaasha iyo ka fogaanshaha iyaga," ayuu Remengesau u sheegay baarlamaanka kadib markii sharciga la ansixiyay usbuucii hore.
Gobolka Hawaii ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay mamnuucida muraayadaha sunta qoraxda ee sunta ah bishii May ee sanadkan, laakiin ma dhaqan galayo illaa 2021, sanad ka dib Palau.